IBlue PUBG Hack Hack Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Luhlaza IPUBG kugula
I-PUBG Blue Hack evela kwi-GamePron ixhotyiswe ngobugcisa be-ESP, iWallhack, kunye neenketho zeAimbot eziqinisekileyo zokukholisa bonke abasebenzisi bethu.
Ukukopela umzuzwana! Ukufumana ukufikelela kwethu kwi-PUBG Blue Hack yoSuku olu-1
Ngaba ujonge ukukhusela ii-win ezimbalwa? Thenga isitshixo seMveliso yeVeki e-1 kwi-Gamepron!
Zinikezele kubugcisa bokuqhekeza kwaye uthenge isitshixo semveliso seNyanga e-1 kwi-Gamepron yanamhlanje!
Senze inkqubo yokusebenzisa izixhobo zethu ukuba ibe lula, ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukuthenga isitshixo semveliso yakho kwaye uya kubaleka. Ukulawula abadlali abanezakhono akukaze kube lula.
PUBG Ulwazi oluBlue
I-PUBG fanatic ekugqibeleni inokuvuya, njengoko kukho isixhobo se-PUBG Blue sokujonga ukusetyenziswa kwazo zonke iimfuno zakho zokukopela. Ubomi abuyi kulunga xa kufikwa kwinqanaba lakho lesakhono kwi-PUBG, ukuba khange udlale iminyaka amathuba okuba uphumelele umdlalo ngokulula mancinci kakhulu. Kukho isizathu sokuba abanye abadlali beqonga bagqalwa njengabaphathi bePUBG, kwaye kungenxa yokuba basebenzisa iPUBG Blue Hack kwiGamepron.
Asithengisi nje nasiphi na isixhobo esidala, kuba le yinto entsha kraca kwi-PUBG Hacks.
Yonke into onokuyifuna ifakiwe ngaphakathi kwi-PUBG Blue Hack. Ungasithemba esi sixhobo ukubonelela ngeyona ndlela ilungileyo yeentshaba ze-ESP, kunye neLoot ESP (kunye nezixhobo ze-ESP). Unokuthembela nakwisixhobo se-PUBG Blue seRadar yayo, akukho kuphinda ubuye, indlela yokulwa, nokunye okuninzi!
Utshaba i-ESP (Amathambo-iibhokisi, umgca)
Ulwazi lutshaba (igama, umgama, isixhobo, impilo)
Ukuphanga i-ESP (Isixhobo: iphakheji, umgama, isithuthi, iprojektha)
Iinjongo ezihlengahlengisiweyo kunye ne-FOV
Injongo yendawo yokukhetha
Malunga nePUBG Blue
IiHacks kunye nokukhohlisa azenziwanga zilinganayo. Kukho isizathu sokuba sibonelele ngokwahluka ngokwahluka okufanayo kwiGamepron, kwaye kungenxa yokuba ukusebenza ngokuchaseneyo sisinongo sobomi! Inani elipheleleyo leempawu ezibandakanyiweyo ngaphakathi kwesi sikhewu sodwa sinokulingana ukuthengwa, kodwa masingavumeli ukuba sikuthethele kuyo-jonga kuvavanyo lomsebenzisi kwaye ubone ukuba bathini. Nokuba yiCrosshair yesiqhelo, iRadar, akukho kubuya mva, okanye iPanic Key function, zininzi izinto eziza kukunceda ugqwese njengomdlali wePUBG. Qalisa namhlanje!
Kutheni usebenzisa iPUBG Blue ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Kutheni le nto ungayichitha imali yakho kwabanye ababoneleli ngempazamo? Nokuba ngandlela thile bakwazile ukubonelela ngenani elifanayo leempawu ezenziwa yiGamepron, amathuba okuba bahlawulisa imali engaphezulu okanye banenye into efihliweyo kwimikhono yabo. Ungathembela kwi-Gamepron ukuba ikunike iihacks ezicocekileyo nezikhuselekileyo kuyo yonke imidlalo oyithandayo (kubandakanya iPUBG), yiyo loo nto abasebenzisi beqhubeka nokusebenza nathi ngazo zonke iimfuno zabo zokugenca. Sukuhlala kancinci xa uzama ukukopa, kuba kuhlala kukho ukhetho olunokubakho apha kwiGamepron!
Xa ufuna ukhetho olufikelelekayo olunokukunceda uphumelele ngakumbi, akukho sixhobo silungileyo sokubeka ukholo lwakho kuyo. Imenyu yomdlalo womdlalo ngumzekelo ogqibeleleyo woko, njengoko uza kubona ukuba kulula kangakanani ukusebenzisa cheats zethu esebenzayo apha Gamepron. Awudingi ukuba ube yikhompyuter esebenzisayo xa usebenzisa iihacks zethu, kwaye awude ufune nokuba ungene ngaphambili!
Ukwenza zonke izinto zethu ezimangalisayo (njengeRadar ye-2D, ukuKhangela okuBonakalayo, akukho kubuya mva, ukuJolisa okungagungqiyo, indlela yokulwa, njlnjl.) Cofa kude kwimenyu yethu yomdlalo, izixhobo zakho ziya kuhlala zifumaneka ngokulula
Q1. Ngaba ukukopela kulula ukuyisebenzisa?
le cheat kulula kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa. Qalisa i-hack> Qalisa umdlalo> Yenza ngokwezifiso izicwangciso zakho> Dlala.
Ewe ungasasaza ngobu buqhetseba kwaye ayizukubonakala kubabukeli.
Ewe ungadlala kwiscreen esigcweleyo okanye nayiphi na imo yokusombulula.
Umgangatho yeyona nto iphambili kuthi kuyo yonke into ekhutshiweyo, kwaye ibonisa! Sizinikezele ngokupheleleyo kumgangatho, yiyo loo nto iGamePron ise # #.
Fumanisa ezona zibalaseleyo zePUBG zonke kwindawo enye! Thenga isitshixo semveliso namhlanje.
Ilindelwe Lawula kunye ne-PUBG Blue Hack?